Noho ny fanonganam-panjakana : Tsy madio i Rajoelina -
AccueilRaharaham-pirenenaNoho ny fanonganam-panjakana : Tsy madio i Rajoelina
22/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny krizy izay nihatra tamin’ny firenena nanomboka ny taona 2009 noho ny fitiavan’ ireo mpitondra tamin’ izany ny seza sy ny fitiavan-tena ihany koa, dia niharan’ny tsindry hazolena ireo malagasy. Araka ny tatitry ny amnistie International ny taona 2010 mikasika io krizy io, dia tahaka ny tsy olombelona no nitondrana ny vahoaka. Manaporofo izany ny tatitry ny amnistie International nivoaka ny taona 2010 « nitohy ny tsy fanaja ny zon’olombelona taorian’ ny fahatongavan’ny fitondrana HAT, tarihin’ i Andry Rajoelina ny 17 martsa 2009. Nitohy ary nihamafy ny herisetra tanterahin’ ny mpitandro filaminana amin’ireo izay manao fihetsiketsehana, ary miara-dalana amin’ izany ny fisamboarana sy fitazonana olona tsy ara-dalàna any am-ponja » araka ny tatitra ao amin’ ny pejy faha-12. Nambaran’ i Andry Rajoelina anefa fa vonona ny hiara-hiasa amin’ireo izay vonona ny tenany tsy mijery lokona kravaty, nefa dia araka ny tatitry ny « amnistie International » dia solombavambahoaka sy mpanao politika avokoa ireo nampidirina am-ponja ireo. Mahavalalanina noho izany ny tsy hifonany amin’ ireo olona izay nogadrainy ireo, fa fifonana manenjika heloka indray no ataony.
Araka ny tatitry ny « amnisitie international » dia nitondra fomba ratsy teto amin’ ny firenena, ary namboly kolontsaina tsy fanarahan-dalàna , izay nampikorosy fahana ny firenena noho ny toe-tsaina novolena. Mazava ihany ny tatitry ny amnistie international ny taona 2009 milaza fa « hita sy tsapan’ny amnesty International ny tsy fanajana ny zon’olombelona , izay mitohy hatrany ao Madagasikara, ary mitohy hatrany ihany koa ny krizy politika. Ny tsy fanajana ny maha olona, famonoana tsy ara-drariny, ny fisamborana sy fitazonana tsy ara-dalàna, ny fanenjehana mpanao gazety sy ny orinasa an-gazety, ary ireo mpisolovava ireo izay tsy nahitana famotorana mazava avy amin’ny mpitondra. Ny manaitra ny « amnistie international » dia tsy nisy mihitsy ny fanenjehana ireo olona izay nanao ireo heloka be vava ireo, ary lasa fanjakan’ ny baroa no tazana. Vokany dia mipetraka ny kolontsain’ny tsimatimanota, izay tahaka ny hoe ankasitrahan’ny mpitondra HAT » araka ny tatitra hatrany. Noho izany mazava ny porofo fa tsy madio velively i Andry Rajoelina, fa teo ny vonoan’olona sy ny fanaovana tsinontsinona ny Malagasy.
Propagandim-pifidianana : Hipoka hatrany ny kianjan’Antsonjombe
Tsy voalohany ary tsy ho farany, ary azo antoka fa mbola ho betsaka ireo ho voafitaka sy mamita-tena amin’ity fanangonana olona amin’ny endriny maro ity. Marson Evariste, Itkly Herizo Razafimahaleo, Roland Ratsiraka, Jean Louis Robinson, ...Tohiny
Ekipan-dRajoelina :RATSY FIAFARA …
Famahana ny olana ara-bary-HAMORAINA NY FAHAZOANA MASOMBOLY